Andreas Christensen ayaa u muuqda inuu ku eedeynayo Cesc Fabregas inuu yahay gooldhaliyaha Lionel Messi ee Chelsea – Walaal24 Newss
Andreas Christensen ayaa u muuqda inuu ku eedeynayo Cesc Fabregas inuu yahay gooldhaliyaha Lionel Messi ee Chelsea
February 21, 2018	35	By walaal24
Chelsea ayaa Barcelona ka faa’ideysatay kulankoodii Champions League, iyadoo qaladka Andreas Christensen uu keenay gooldhalinta Lionel Messi. Willian ayaa Chelsea hogaanka u dhiibay kulankii Stamford Bridge, halka Barcelona ay ku dhibtooneysay inay abuurto fursado cadcad inta ay ciyaarta socotay. Hase yeeshee kooxda heysata horyaalka Premier League ayaa lagu ciqaabay hal guuldaro, Messi ayaana ku dhawaa inuu badbaadiyo barca 1-1. Christensen ayaa barbareeyay barbaraha goolasha Barcelona isagoo dhaliyay goolkiisii ​​ugu horeysay ee Cesc Fabregas.
Ciyaaryahanka khadka dhexe ee reer Spain ayaa kubada u ogolaaday inuu shabaqa soo taabto islamarkaana Andreas Iniesta uu badbaadiyay booskiisa ka hor Cesar Azpilicueta. Iniesta ayaa awood u yeeshay inuu kubada u celiyo Messi, kaasoo dhameystiray Thibaut Courtois. Iyadoo xiddiga reer Argentine uu u dabaaldegayay inuu u dabaaldego taageerayaasha Barcelona, ​​Christensen ayaa u muuqday inuu farta ku fiiqay Fabregas, isagoo si cad u sheegay inuu doonayo inuu saaxiibkiisa Chelsea u xakameeyo dariiqa.
Qaar ka mid ah Taageerayaasha Chelsea ayaa isku raacay in Fabregas uu ahaa ciyaaryahan qalad ah, halkii uu ka ahaa Christensen oo ciyaaray khatartii hore ee goolkiisa.
Cayaarta oo ku soo dhamatay sidatan:-
Hordhaca Leganes v Real Madrid wareega 16-aad ee LaLiga Spain
Bayern Munich ku dur durisay Besiktas ayaa ku soo laabatay hogaanka horyaalka Bundesliga ka dib markii ay badiyeen 14 kulan oo isku xiga.
The Doomsday Conspiracy by Sidney Sheldon says:
Madaxweynaha Puntland iyo Safiirada Midowga Yurub oo ka wada hadlaya xiisada u dhaxeysa Puntland iyo Somalilan
Taliye Kuxigeenka Ciidanka Booliska Zakiye oo sheegtay iney xabsiga la dhigay askari dil u geystay wade Moota Bajaaj